01/06/2018 - Page 2 sur 4 -
Fifohana sigara : Laharana faharoa amin’ny fahatapahan’ny lalan-dra
Andro maneran-tany natokana tsy hifohana sigara ny andron’ny 31 mey. Andro natao ihany koa hampatsiahivana ny voka-dratsy ny tokony tsy hifohana sigara eo amin’ny fahasalamana. Ho an’ity taona ity, dia lohahevitra ny fankalazana ny hoe, …Tohiny
Fikajiana ny tontolo iainana : Mila hamafisana ny fiaraha-miasa amin’ireo mpikaroka
Fitokanana fotodrafitrasa roa goavana sy fankalazana ny faha-30 ny CNRE (Centre national de recherches sur l’environnement) no niseho teny amin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika omaly. Trano iray natokana ho an’ny DGOSAS na …Tohiny
Nosy Be : Mpizahatany maty natelin’ny ranomasina
Nitangorona ny olona tamin’ny fahitana ny vatana mangatsiaka-na lehilahy teratany “Suisse” 71 taona natsingevan’ny ranomasin’Ambondrona Dzamandjar, distrikan’i Nosy Be ny 29 mey lasa teo, tokony ho tamin’ny 04 ora sy sasany hariva. Niantso ny teo …Tohiny
Ambanja : Mpandraharaha notafihina dimy lahy nirongo basy
Tranona mpandraharaha iray tany Tanambao, distrikan’Ambanja no notafihina dimy lahy nirongo basy sy zava-maranitra ny harivan’ny alarobia lasa teo. Lasan’ireo olon-dratsy tamin’izany ny vola mitentina 240 Tapitrisa Ariary tao anaty valizy miisa telo niaraka tamin’ny …Tohiny
Tontosa omaly ny fifamindram-pahefana teo amin’ny filohan’ny antenimieran-doholona vaovao Rivo Rakotovao, sy ny teo aloha Honoré Rakotomanana, tetsy amin’ny lapa maitso Anosikely. Natrehan’ ireo mambra eo anivon’ny governemanta sy ny filohan’ny antenimieram-pirenena ny lanonana , ...Tohiny
Migadra i Claudine : Foana ve ny Kolikoly?